Maxkamada Qalabka o xukun Dil ah riday | KEYDMEDIA ONLINE
Maxkamada Qalabka o xukun Dil ah riday
Muqdisho (KON) - Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa goor dhow Xukun Dil ah ku fulisay Gacan ku dhiiglihii Dilay, Allaha ha u naxariistee Wariye Xasan Yuusuf Absuge oo bishii September ee Sanadkii hore lagu dilay degmada Yaaqshiid.
Fulinta xukunkan dilka ayaa waxaa ka soo qeyb galay Saraakiil ka tirsan Booliska iyo Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow iyo saraakiil ka tirsan Maxkamada ciidamada qalabka sida.
Ninka dilka lagu fuliyay oo lagu magacaabi jiray Aadan Cabdi Xuseen ayaa horaantii Sanadkan ay Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ay ku riday Dil Toogasho ah, hase ahaatee racfaan ka qaatay mar kale ay Maxkamadu ku riday xukun dil ah.
Saraakiil ka tirsan Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in gacan ku dhiiglahan uu ahaa ninkii ka dambeeyay dilka, isla markaana cadeymo loo helay, waxaana markii falka dilka geystay la sheegay inuu ku cararay guri, dabadeedna shaatigiisa oo dhiig lahaa uu ku soo bedeshay.
Allaha u naxariistee Wariye Xasan Yuusuf Absuge ayaa ka howl galayay Idaacada Maanta, waxaana uu horay uga soo shaqeeyay warbaahino kala duwan oo ay ka mid tahay Radio Muqdisho.
Waa markii u horeysay oo Maxkamada Ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ah ku fulisay nin ka mid ahaa gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay dilalka suxufiyiinta Soomaaliyed oo sanadkii la soo dhaafay aheyd sanadkii ugu dilka badnaa ee wariyeyaasha